Ka go'naanshaha sinnaanta - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Ku saabsan CHPW > Ka go'naanta sinnaanta
Ka go'naanta sinnaanta
Maaddaama aan nahay urur daryeel caafimaad oo ay aasaaseen dhaqdhaqaaqa Xarunta Caafimaadka Bulshada, shaqadeennu waxay xididdo hoose ku leedahay dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah.
U doodista iyo daryeelida shakhsiyaadka iyo jaaliyadaha sida xun ay u saameeyeen cunsuriyada midab iyo bulsheed waxay udub dhexaad u tahay Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee himilada Washington. Maaddaama aan nahay urur daryeel caafimaad oo ay aasaaseen dhaqdhaqaaqa Xarunta Caafimaadka Bulshada ku dhowaad 30 sano ka hor, shaqadeennu waxay xididdo hoose ku leedahay dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah.
Waxaan si buuxda uga warqabnaa dhibaatada cunsuriyada nidaamka dhaqaale iyo cadaalad darada dhaqaale ee ku haysa caafimaadka iyo daryeelka bulshadayada. Cudurka faafa ee 'COVID-19' wuxuu kaliya kordhiyay xiriirkan tooska ah.
Waxaan xaqiijineynaa in Nolosha Madow ay Tahay. Ilaa iyo inta nolosha madow laga qiimeeyo wax aan ka yarayn nolosha cad, farqiga u dhexeeya himilooyinka dalkeenna iyo waaqica ayaa sii ballaadhi doona.
Waxaan taageersanahay ficillada nabadeed si wax looga qabto sinaan la’aanta jinsiyadaha iyo caddaaladda bulshada.
Waxaan si firfircoon u raadineynaa inaan wax ka qabanno sinnaan la'aanta daryeelka caafimaadka, iyo bey'adaha bulshada, deegaanka, siyaasadda, iyo dhaqaalaha ee si xun u saameeya fayoobaanta dadka taariikh ahaan la takooro.
Waxaan ballanqaadeynaa safarkayaga cunsuriyadda ka soo horjeedka waxaanan u istaageynaa midnimo xubnaheenna, bukaannada, asxaabta iyo jaallayaasha bulshada
Waxaan ula shaqeyneynaa xulufadeena bulshooyinka.
Cambaareyn cunsuriyada, naceybka naceybka iyo dulqaad la'aanta Aasiyaanka, Aasiya Ameerika iyo Jasiiradaha Baasifigga
Dhawaan, waxaa jiray sheekooyin badan oo warar ah oo ku saabsan dambiyada rabshadaha ah ee ka dhanka ah Aasiyaanka iyo Aasiyaanka Ameerikaanka ah ee ku nool magaalooyin ku yaal Ameerika laga soo bilaabo aagga San Francisco Bay illaa magaalada New York sida maqaalkan ku yaal New York Times oo la yiraahdo "Sannad Cusub oo Xiisad Leh oo loogu talagalay Aagga Baay Kadib Weeraradii Aasiya-Ameerikaanka." Xisaabaadyadani waxay iftiiminayaan kor u qaadista weerarada iyo naxariisdarrada ay bulshooyinka Aasiya arkayaan - oo ay ku jiraan dhacdooyinka xaafadaha Seattle.
Maaddaama bulshooyin badan oo Aasiya ay u dabaal-dagaan Sannadka Cusub ee Lunar toddobaadkan, Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington wuxuu doonayaa inuu kor u qaado wacyiga dhibaatadan kororka leh ee dambiyada nacaybka oo uu dhammaanteen noogu baaqo inaan ka hadalno nacaybka iyo sababaha keena dulqaad la'aanta. Waxaan si buuxda u cambaareyneynaa dhammaan ficillada midab-takoorka, ajnabi nacaybka, iyo dulqaad la'aanta ka dhanka ah Aasiya Ameerika iyo Jasiiradaha Baasifigga (AAPI), iyo kuwa kale ee la kulmay weerarro la mid ah. Kordhinta dulqaad la'aanta iyo ficillada rabshadaha ka dhanka ah shakhsiyaadka, qoysaska, iyo bulshada AAPI waa inay naga wada khuseeyaan - maadaama dhammaanteen waxyeello na soo gaadhay markii nacayb loo oggolaaday inuu fido oo koro. Gaar ahaan inta lagu gudajiray Cudurka faafa ee COVID-19, waa inaan kahadalnaa xasuuqa dadka aan waxba galabsan ee sidoo kale ku dhibaataysan xooggeeda dilaaga ah.
Waxaan sii wadeynaa inaan u yeerno oo aan canbaareyno hadalada xanafta leh iyo naceybka naceybka iyo ficilada gardarada ah ee ka dhanka ah xubnaha bulshada AAPI iyo dhamaan dadka la kulma cunsuriyada, gardarada, ama si xun ula dhaqmida kaliya sababta ay yihiin - hadey ahaan laheyd qowmiyadooda ama isirkooda, caqiidada diinta ama nooca galmada. Waa inaan dhammaanteen sii wadnaa raadinta adduunyo caddaalad iyo caddaalad ku dhisan oo qof walba loola dhaqmo si sharaf iyo xushmad leh.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington / Shabakada Caafimaadka Bulshada ee Washington
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Taariikhda: Febraayo 23, 2021